သဘောမတူကြောင်းကို နားဝင်ချိုယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုနည်းများ - Myanmar Network
သဘောမတူကြောင်းကို နားဝင်ချိုယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုနည်းများ
Posted by Soe Soe Win on August 14, 2015 at 11:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပြီးခဲ့သော တစ်ပတ်က ကျွန်ုပ်တို့ သူတစ်ပါးအား တောင်းဆိုမှုပြုရာတွင် ပိုမို၍နားဝင်ချိုစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် Softeners ခေါ် ပျော့ပျောင်းစေသည့်အရာများ (ယဉ်ကျေးသောစကားလုံးများနှင့် စကားလုံးစုများ) ကို လေ့လာကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည်။ ဒီတစ်ပတ်တွင် အခြားသူများနှင့် သဘောမတူသောအခါတွင် ရိုင်းပြသောလေသံမျိုး မဖြစ်စေရန် (သို့) ပြင်းထန်သော လေသံပေါက်သည့် ထင်မြင်ယူဆချက်များ မဖော်ပြချင်သောအခါမျိုးတွင် အသုံးပြုသော စကားစု အမျိုးအစားကို လေ့လာကြည့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
I disagree with you. (ကျွန်ုပ် သင်နှင့် သဘောထားမတူပါ။) ဟူ၍ ပြောဆိုခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် အလွန်ပြင်းထန်သည့် လေသံပေါက်ပြီး၊ လူအများက ၎င်းကို အသုံးမပြုကြပါ။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဘောမတူမှုကို တကယ်ဖော်ပြလိုပြီး၊ ဤစကားလုံးစုကို အသုံးပြုလိုသောအခါမျိုးတွင်လည်း ပထမဆုံး တောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့် အနည်းငယ် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှု ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။
I’m afraid I disagree with you there. / I’m sorry, I disagree with you there. (တောင်းပန်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီနေရာမှာ ငါ မင်းနှင့်သဘောထား မတူညီပါ။)
“I disagree with you ” ကို အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းစေသော နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ၎င်းကို “I have to say” (ကျွန်ုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်) နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
I have to say, I disagree with you, James. (ငါပြောရမယ်ဆိုရင် ငါ မင်းနှင့် သဘောထားမတူနိုင်ဘူး၊ ဂျိမ်း(စ်))
သို့သော်လည်းပဲ မကြာခဏဆိုသလို သဘောထားမကိုက်ညီကြောင်း ဖော်ပြသည့်အခါ ပြင်းထန်မှု လျော့နည်းသောစကားလုံးစုမျိုးကို သုံးရန် ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် အသုံးများသော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ “I’m not sure ….” (ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။) သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူသော နောက်ထပ်စကားစုတစ်ခုကို ရှေ့တွင်ခံ၍အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
I’m not sure I agree with you there. (အဲ့ဒီမှာ ငါ မင်းနဲ့ သဘောထားတူတယ်ဆိုတာ မသေချာဘူး။)
I’m not sure that’s always true. (ဒါအမြဲတမ်း မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ ငါ မသေချာဘူး။)
I’m not convinced that’s the case. (ဒီဟာအမှန်လို့ ငါ ဘဝင်ကျလက်မခံဘူး။)
ဤကဲ့သို့သော ပြောဆိုချက်များသည် တိကျမှုပိုမိုလျော့နည်းသည့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောနေသည့် ပုံစံပေါက်နေသော်ငြား လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် “ I don’t agree ” (ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။) ဟုသာဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းသည် ယေဘူုယျအားဖြင့် သဘောမတူခြင်းကို အနည်းငယ် ပိုမိုနူးညံ့စွာ ပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူစွာပင် မေးခွန်းတစ်ခု မေးနေသယောင်ပြု၍ ပြောဆိုချက်တစ်ခုကို သဘောမတူကြောင်း တန်ပြန်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်လည်း အနည်းငယ်ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော သဘောမတူနည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
Statement : In any case, women are better at there sorts of tasks than men. (ပြောဆိုချက်:ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေက ဒီလိုတာဝန်အမျိုးအစားတွေမှာ ယောက်ျားတွေထက် ပိုသာပါတယ်။)
Response : Is that really true? In my experience, men are just as good. (ပြန်ဖြေခြင်း : ဒါတကယ်ပဲ မှန်တယ်လား၊ ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံအရဆိုလျှင် ယောက်ျားတွေလည်း တူညီစွာ တော်ပါတယ်။)
Response : Is that always the case? I know plenty of men who are just as good as women. (ဒါအမြဲတမ်းမှန်လို့လား၊ အမျိုးသမီးတွေလိုပဲ တော်တဲ့အမျိုးသားတွေ ကျွန်ုပ်အများကြီး သိပါတယ်။)
Response: Do you think so? I’m not so sure that’s the case. (တုံ့ပြန်ပုံ : သင် အဲ့ဒီလို ထင်တယ်လား၊ အဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ ကျွန်ုပ် သိပ်မသေချာပါဘူး။)
သဘောမတူမှုအား ပျော့ပျောင်းလာစေရန်ပြုလုပ်သော တတိယနည်းလမ်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ပြောကြားချက်ကို သင်နားလည်ကြောင်း သို့မဟုတ် သူတုိ့ပြောနေသောအရာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက မှန်ကန်သည်ကို လက်ခံကြောင်း ပထမဆုံး ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှ သင်သည် သဘောထားမတူညီသည်မှာ မည်သည့်အရာဟူသည်ကို တိကျစွာ ဆက်လက်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
I take your point – she’savery experienced teacher, but I’m afraid I don’t think she’s right for this particular job. (သင်ပြောသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်လက်ခံပါတယ်။ သူမဟာအလွန် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ် ဝမ်းနည်းစွာနှင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် သူမသည် ဤကဲ့သို့သော အလုပ်မျိုးနှင့် သင့်လျော်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။)
I do understand what you’re saying. I just don’t think we have the resources to do this. (သင်ဘာပြောနေသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ် တကယ်ကို နားလည်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကို လုပ်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ရှိတယ်လို့ ကျွန်ုပ် မထင်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။)
I hear what you’re saying – the problem needs fixing. I just don’t think now is the time to do it. (ခင်ဗျားဘာပြောနေသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်ကြားပါတယ်။ ပြဿနာကဖြေရှင်းဖို့လိုနေတယ်။ အခု အဲ့ဒါလုပ်ရမယ့်အချိန်လို့ ကျွန်ုပ် မထင်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။)
သေချာသည်ကတော့ သင် သည် သင် ရွေးချယ်သောမည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မဆို လွတ်လပ်စွာ သဘောထားမတူမှု ပြသနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ထိုသို့ပြောဆိုရာတွင် အလွန်တိုက်ရိုက်ဆန်လွန်း သို့မဟုတ် ရိုင်းပြလွန်းသော လေသံမပေါက်စေရန် သေချာချင်သည်ဆိုလျှင်တော့ အထက်ပါ နည်းလမ်းများအားသုံးပါရန် အကြံပြုပါရစေ။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ I’m afraid I disagree with you ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပွီးခဲ့သော တဈပတျက ကြှနျုပျတို့ သူတဈပါးအား တောငျးဆိုမှုပွုရာတှငျ ပိုမို၍နားဝငျခြိုစရေနျ အသုံးပွုနိုငျသညျ့ Softeners ချေါ ပြော့ပြောငျးစသေညျ့အရာမြား (ယဉျကြေးသောစကားလုံးမြားနှငျ့ စကားလုံးစုမြား) ကို လလေ့ာကွညျ့ရှု့ခဲ့ပါသညျ။ ဒီတဈပတျတှငျ အခွားသူမြားနှငျ့ သဘောမတူသောအခါတှငျ ရိုငျးပွသောလသေံမြိုး မဖွဈစရေနျ (သို့) ပွငျးထနျသော လသေံပေါကျသညျ့ ထငျမွငျယူဆခကျြမြား မဖျောပွခငျြသောအခါမြိုးတှငျ အသုံးပွုသော စကားစု အမြိုးအစားကို လလေ့ာကွညျ့မညျဖွဈပါသညျ။
I disagree with you. (ကြှနျုပျ သငျနှငျ့ သဘောထားမတူပါ။) ဟူ၍ ပွောဆိုခွငျးသညျ အင်ျဂလိပျဘာသာတှငျ အလှနျပွငျးထနျသညျ့ လသေံပေါကျပွီး၊ လူအမြားက ၎င်းငျးကို အသုံးမပွုကွပါ။ သို့သျောလညျး အကယျ၍ ပွငျးပွငျးထနျထနျ သဘောမတူမှုကို တကယျဖျောပွလိုပွီး၊ ဤစကားလုံးစုကို အသုံးပွုလိုသောအခါမြိုးတှငျလညျး ပထမဆုံး တောငျးပနျခွငျးအားဖွငျ့ အနညျးငယျ နူးညံ့ပြော့ပြောငျးမှု ဖွဈစရေနျ ပွုလုပျလရှေိ့ပါသညျ။
I’m afraid I disagree with you there. / I’m sorry, I disagree with you there. (တောငျးပနျပါတယျ၊ အဲ့ဒီနရောမှာ ငါ မငျးနှငျ့သဘောထား မတူညီပါ။)
“I disagree with you ” ကို အနညျးငယျပြော့ပြောငျးစသေော နောကျထပျ နညျးလမျးတဈခုမှာ ၎င်းငျးကို “I have to say” (ကြှနျုပျပွောရမယျဆိုရငျ) နှငျ့ စတငျမိတျဆကျရနျ ဖွဈပါသညျ။
I have to say, I disagree with you, James. (ငါပွောရမယျဆိုရငျ ငါ မငျးနှငျ့ သဘောထားမတူနိုငျဘူး၊ ဂြိမျး(ဈ))
သို့သျောလညျးပဲ မကွာခဏဆိုသလို သဘောထားမကိုကျညီကွောငျး ဖျောပွသညျ့အခါ ပွငျးထနျမှု လြော့နညျးသောစကားလုံးစုမြိုးကို သုံးရနျ ပိုမိုနှဈသကျကွပါသညျ။ ဤသို့ပွုလုပျရနျ အသုံးမြားသော နညျးလမျးတဈခုမှာ “I’m not sure ….” (ကြှနျုပျမသခြောပါ။) သို့မဟုတျ ၎င်းငျးနှငျ့အဓိပ်ပာယျဆငျတူသော နောကျထပျစကားစုတဈခုကို ရှတှေ့ငျခံ၍အသုံးပွုရနျဖွဈပါသညျ။
I’m not sure I agree with you there. (အဲ့ဒီမှာ ငါ မငျးနဲ့ သဘောထားတူတယျဆိုတာ မသခြောဘူး။)
I’m not sure that’s always true. (ဒါအမွဲတမျး မှနျကနျတယျဆိုတာ ငါ မသခြောဘူး။)
I’m not convinced that’s the case. (ဒီဟာအမှနျလို့ ငါ ဘဝငျကလြကျမခံဘူး။)
ဤကဲ့သို့သော ပွောဆိုခကျြမြားသညျ တိကမြှုပိုမိုလြော့နညျးသညျ့ တဈစုံတဈခုကို ပွောနသေညျ့ ပုံစံပေါကျနသေျောငွား လညျး ပုံမှနျအားဖွငျ့ “ I don’t agree ” (ကြှနျုပျသဘောမတူပါ။) ဟုသာဆိုလိုပါသညျ။ ၎င်းငျးကဲ့သို့ပွောဆိုခွငျးသညျ ယဘေူုယအြားဖွငျ့ သဘောမတူခွငျးကို အနညျးငယျ ပိုမိုနူးညံ့စှာ ပွောဆိုခွငျးပငျဖွဈပါသညျ။
အလားတူစှာပငျ မေးခှနျးတဈခု မေးနသေယောငျပွု၍ ပွောဆိုခကျြတဈခုကို သဘောမတူကွောငျး တနျပွနျပွောဆိုနိုငျပါသညျ။ ဤသို့ပွုခွငျးသညျလညျး အနညျးငယျပိုမိုပြော့ပြောငျးသော သဘောမတူနညျးပငျ ဖွဈပါသညျ။
Statement : In any case, women are better at there sorts of tasks than men. (ပွောဆိုခကျြ:ဘယျလိုဘဲဖွဈဖွဈ အမြိုးသမီးတှကေ ဒီလိုတာဝနျအမြိုးအစားတှမှော ယောကျြားတှထေကျ ပိုသာပါတယျ။)
Response : Is that really true? In my experience, men are just as good. (ပွနျဖွခွေငျး : ဒါတကယျပဲ မှနျတယျလား၊ ကြှနျုပျအတှအေ့ကွုံအရဆိုလြှငျ ယောကျြားတှလေညျး တူညီစှာ တျောပါတယျ။)
Response : Is that always the case? I know plenty of men who are just as good as women. (ဒါအမွဲတမျးမှနျလို့လား၊ အမြိုးသမီးတှလေိုပဲ တျောတဲ့အမြိုးသားတှေ ကြှနျုပျအမြားကွီး သိပါတယျ။)
Response: Do you think so? I’m not so sure that’s the case. (တုံ့ပွနျပုံ : သငျ အဲ့ဒီလို ထငျတယျလား၊ အဲ့ဒါမှနျတယျလို့ ကြှနျုပျ သိပျမသခြောပါဘူး။)
သဘောမတူမှုအား ပြော့ပြောငျးလာစရေနျပွုလုပျသော တတိယနညျးလမျးမှာ တဈစုံတဈယောကျ၏ ပွောကွားခကျြကို သငျနားလညျကွောငျး သို့မဟုတျ သူတို့ပွောနသေောအရာ၏ တဈစိတျတဈပိုငျးက မှနျကနျသညျကို လကျခံကွောငျး ပထမဆုံး ပွောခွငျးဖွဈပါသညျ။ ပွီးမှ သငျသညျ သဘောထားမတူညီသညျမှာ မညျသညျ့အရာဟူသညျကို တိကစြှာ ဆကျလကျပွောဆိုနိုငျပါသညျ။
I take your point – she’savery experienced teacher, but I’m afraid I don’t think she’s right for this particular job. (သငျပွောသောအခကျြကို ကြှနျုပျလကျခံပါတယျ။ သူမဟာအလှနျ အတှအေ့ကွုံရငျ့ကကျြသော ဆရာတဈယောကျဖွဈပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ကြှနျုပျ ဝမျးနညျးစှာနှငျ့ ပွောရမညျဆိုလြှငျ သူမသညျ ဤကဲ့သို့သော အလုပျမြိုးနှငျ့ သငျ့လြျောမညျဟု ကြှနျုပျမထငျပါ။)
I do understand what you’re saying. I just don’t think we have the resources to do this. (သငျဘာပွောနသေလဲဆိုတာ ကြှနျုပျ တကယျကို နားလညျပါတယျ။ အဲ့ဒါ ကို လုပျဖို့အတှကျ စှမျးအငျအရငျးအမွဈတှေ ကြှနျုပျတို့ဆီမှာ ရှိတယျလို့ ကြှနျုပျ မထငျရုံသာဖွဈပါတယျ။)
I hear what you’re saying – the problem needs fixing. I just don’t think now is the time to do it. (ခငျဗြားဘာပွောနသေလဲဆိုတာ ကြှနျုပျကွားပါတယျ။ ပွဿနာကဖွရှေငျးဖို့လိုနတေယျ။ အခု အဲ့ဒါလုပျရမယျ့အခြိနျလို့ ကြှနျုပျ မထငျရုံသာဖွဈပါတယျ။)
သခြောသညျကတော့ သငျ သညျ သငျ ရှေးခယျြသောမညျသညျ့နညျးလမျးနှငျ့မဆို လှတျလပျစှာ သဘောထားမတူမှု ပွသနိုငျပါသညျ။ သို့သျော အကယျ၍ သငျသညျ ထိုသို့ပွောဆိုရာတှငျ အလှနျတိုကျရိုကျဆနျလှနျး သို့မဟုတျ ရိုငျးပွလှနျးသော လသေံမပေါကျစရေနျ သခြောခငျြသညျဆိုလြှငျတော့ အထကျပါ နညျးလမျးမြားအားသုံးပါရနျ အကွံပွုပါရစေ။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ I’m afraid I disagree with you ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Related Lesson - အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိပြောစကားကို ညင်သာပျော့ပျောင်းစေသည့် so...
ဘန်းစကားလေ့လာကြမလား (Are You Up for Slang? by Tom Hayton)
''ဘန်းစကား'' သည် အလွတ်သဘော နှုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့် သိစေသော စကားစုအမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝထဲကအသုံးအနှုန်းလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘန်းစကားကို ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် လူမှုအုပ်စုအလိုက် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြတယ်။ လူမှုရေး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် လျင်မြန်စွာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး နေ့ချင်းညချင်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဘန်းစကား အမျိုးမျိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဥပမာများနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
မှားတတ်သောစကားလုံးများ (Commonly Confused Words by Guy Perring)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ စကားလုံးတွေ အတော်များများ ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်နေတဲ့အတွက် မကြာခဏ ရောထွေးပြီး မှားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ အနောက်တိုင်းက ပျိုရွယ်သူတို့သဘာဝ နှစ်ယောက်တည်း အပြင်ထွက်လည်ပတ်ကြတဲ့အခါ (ရိုးရိုးသားသားပါ) ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ ရုပ်ရှင်က ပျင်းစရာကောင်းလို့ ဒို့တော့ ပျင်းလိုက်တာလို့ ပြောချင်တာနဲ့ “I’m boring” လို့ ပြောမိတယ်ဆိုပါစို့။ boring ဆိုတာ ပျင်းစရာကောင်းတယ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါတယ်။ ဒို့က ပျင်းစရာကောင်းတဲ့လူလို့မှားပြောမိပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ တစ်ဖက်သားက ဖေးဖေးမမ မပြောဘဲ “Yes, you are” ''ဟုတ်တယ်၊ ပျင်းစရာကောင်းသူဘဲ'' လို့ အငေါ်တူးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီဆက်ဆံရေးဟာ အနည်းဆုံး အဲဒီနေ့ လူချင်းမခွဲမချင်း အဆင်ပြေတော့မယ် မထင်ဘူး။
Bring နဲ့ take၊ borrow နဲ့ lend၊ boring နဲ့ bored စတဲ့ မှားတတ်သောစကားလုံးများများကို နောက်ထပ်မမှားရအောင်ဘယ်လို ခွဲခြားမလည်းဆိုတာကို ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ဆရာ Guy Perring မှ ရေးသားရှင်းပြထားပါတယ်။
စကားပြောရာမှာ အသံကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုခြင်း (Be Vocal by Guy ...
အလုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးပါတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုကတော့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ အရေးကြီးကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိရေး အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုတတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုရာမှာ ၀ါကျထဲမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရတွေထဲမှာ ဘယ်ဝေါဟာရကို အလေးအနက် ပြုသလဲဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အရေးပါ ပါတယ်။
Permalink Reply by Ma Mahello on August 14, 2015 at 16:35
Permalink Reply by Aung Win Naing on August 14, 2015 at 18:16
Permalink Reply by Khing Wai on August 16, 2015 at 1:29
Permalink Reply by Richard Michael William on August 16, 2015 at 8:07
Permalink Reply by San Lwin on August 16, 2015 at 12:26
It sound really good. Sometime We need to express our feeling of deny more softly in common speaking.
Permalink Reply by Smile Lay on August 17, 2015 at 9:24
Permalink Reply by Min Khant Aung on August 24, 2015 at 16:43
Permalink Reply by Khin Toe Lwin on September 8, 2015 at 13:35
Permalink Reply by htaykyaw on October 25, 2015 at 8:50
I amamamber but don't receiveed your message. because
Permalink Reply by Mg Zar Ni on October 25, 2015 at 9:26
Wowagreat lesson!thanksalot